सेरोफेरो : मेरो भविष्य उसको हातमा छ
उसका अक्षरहरूले कापीका पानामा भड्किलो अंग्रेजी गीतमा डिस्को नाँच्थे ।
महिना भरिमा केही दिन त उ गयल हुन्थ्यो । ज्वोरो आयो सर । टाउको दुख्यो । ड्रेस सुकेन । पूजा थियो । आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो । बाटोमा आउँदै गर्दा ड्रेसमा हिलो छ्यापियो अनि फर्केँ । यस्तै यस्तै बहाना बनाउथ्यो उ ।
उसको बहाना बैंकमा ब्यालेन्स सकिए पछि चुपचाप बेन्च अगाडी उभिएर मुन्टो झोक्राउथ्यो । उसको टालटुले बानीले म आजित भएको थिएँ ।
जाँचमा एक वा दुई विषयमा मात्र पास हुन्थ्यो उ । बाँकीमा सबमा आलु । एक पटक उ १३ दिन सम्म स्कुलै आएन । ठूलै बिरामी प¥यो भन्ने शंका लाग्यो । १४ औं दिनमा उनकी आमाले उसलाई समातेर ल्याइन । उ हरेक दिन स्कुल जाने भनेर ड्रेस लगाएर घरबाट निस्कने अनि फेवाताल पौडन जाने, माछा मारेर दिन बिताउने अनि साँझ परेपछि मात्र घर फर्कने गर्दो रहेछ । उसको दैनिकी धेरै दिन पछि आमाले थाहा पाइछन र कान समातेर ल्याइन । छोरोको हरकतले मेरो अघि उनकी आमा धेरै रोइन । मन कटक्कै खायो । मैले उसलाई त्यसबेला धेरै सम्झाएँ । लाग्थ्यो, यो मान्छे मात्र राम्रो भयो भने मैले केही कमाएँ भन्ने सोचुँला । तर उ सुध्रिएन ।
होमवोर्क सकेसम्म नगर्ने । गरे पनि आधा गर्ने । अक्षर टालटुल पार्ने । ढोकै उप्काएको घर जस्तो खोल च्यातिएको किताब । बमको छर्रा लागेर धुजा परेको जस्तो कापी । भैसीले घाँस देखेर मुख उघारेको जस्तो चेन फुस्केको झोला । आफ्नो सामानको जतन गर्ने उसको बानी नै थिएन । सम्झाए पनि उ उस्तै रह्यो ।
कक्षामा कहिले कसैलाई कुट्ने, कहिले कसैको सर्ट तान्दिने, कुनै कुनैसँग झगडा गर्ने । धेरै खालको कम्प्लेन आएपछि मेरो दिमागको पारो पनि चढ्दै गएको थियो उ प्रति । बेलाबेलामा उसकै अभिभावक आएर पनि उसलाई पिटेरै तहलाइदिनु प¥यो भन्ने कुरा गर्थे ।
रिसको झोकमा मैले एकदिन उसलाई साँच्चै कुटेँ । जति कुटे पनि उ मलाई झन् आँखा तरेर हेथ्र्यो । पहिलो पटक शिक्षक भएकाले ममा खुबै बडप्पन आएको थियो । ‘मैले यसलाई मान्छे बनाउनु पर्छ,’ मनमनै सोच्थेँ, ‘यसको भविष्य मेरो हातमा छ ।’
आफ्नै भविष्यको लागि स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न किर्तीपुर हानिए पछि मैले सारा कुरा बिस्तारै भुल्दै गएँ । २०६२ साल थियो त्यो । सबै कुरा भुल्न थालेपनि घुरेर हेर्ने उसको गहिरो हेराइ भने मैले कहिल्यै विर्सेको थिइन् ।
गाडी चलेपछि मैले झ्यालबाहिर आँखा डुलाउन थालेँ । गाउँका गह्रा गह्राबाट मुल फुटेर निस्केको पानी कच्ची सडक तिर ओर्लेका थिए । सडकका ठाउँठाउँमा ताल बनेको थियो ।
‘सर ऐले कता हुनुहुन्छ,’ उसले पछाडी फर्केर सोध्यो ।
‘काठमाडौं’ मैले भने ।
‘उतै जान लाउनु भाको ?’
‘हैन पोखरा सम्म’
उसँग धेरै कुरा भएनन । गर्न पनि भएन । उ स्टेरिङ बटार्दै थियो । म उसलाई हेरेर कतै हराइराखेको थिएँ ।
‘मैले पढाएको केटो ड्राइभर भो’
बाक्यलाई मनमनै चिरफार गर्न थालेँ । मैले फिजिक्समा स्नातक गरेँ । न कुनै नयाँ प्रविधी इन्भेन्सन गरेँ न कुनै थ्यौरी तयार गरेँ । उहि स्कुल पढाएँ सक्किगो । इकोनोमिक्समा मास्टर्स गरेँ । न कुनै बैंकिङ कारोबारमा काम गरेँ न कुनै कम्पनीको व्यवस्थापनामा पसेँ । डिग्री पास गरेँ त के नापेँ ? के म गाडी चलाउन सक्छु ? त्यो पनि यो कच्ची सडकमा ? म हाँसे, ‘कमसेकम उसले त सक्छ नी ।’
ड्राइभर भन्दैमा किन नाक खुम्च्याउँछौं हामी ? हरेक पेशाको सम्मान गर्न किन नसकिएको होला ? हरेक पेशाको महत्व छ । पढ्दा दिमागमा घुस्दै नघुस्नेलाई किन खाली पढाइमा रट्टाउनु ? अक्षर चिनेपछि, उमेर पुगेपछि अनि कुरो बुझ्ने भएपछि कसैलाई गाडीमा, कसैलाई पल्म्बरीङ, बेल्डिङ्ग, रेडियो, घडि, कम्प्युटर मोबाइल, टिभी मर्मतमा लगाइदिए किन हुन्न ?
दश कक्षाबाट स्नातक सम्म आउँदा सालाखाला दश वर्ष त सकिन्छ नै । दश वर्षमा एउटा मान्छेले एउटै पेशामा पुरै हात सफा गर्न सक्छ । १० वर्ष सम्म टिभीको ज्याक खोलेर भित्र हेर्न थाल्यो भने टिभीको आन्द्राभुडिमात्र हैन त्यसभित्रका नसा नसा पनि केलाइ सक्छ । रविनले पढ्न नसक्नु उसको कमजोरी हैन उसलाई बेलैमा बुझ्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । हात उठाएरै तह लगाउन खोज्नु मेरो पनि कमजोरी थियो । आखिरीमा ६ कक्षामा फेल भएर अर्को साल बल्ल बल्ल ७ चढेपछि उसले स्कुले छाडेको रहेछ । उ अझै पनि स्कुलमै लद्दीएको भए १० सम्म पनि पुग्न गाह्रो हुन्थ्यो । थप दश वर्ष पढेर डिग्री सम्म पुगेको भए पनि १० हजार तलब पाउन गाह्रो हुन्थ्यो । उसले स्कुल छाड्यो त के भयो ? के स्कुल पढेर मात्रै मान्छे सिपालु हुन्छन् ?
चामल पसलमा फल्छ । दूध डेरीबाट दुहुने हो । फलफूल ठेलामा पाक्छ । स्कुल गए पनि बच्चाबच्चीले यस्तै भन्छन् । व्यवहारिक शिक्षा नहुँदा वास्तविक धरातल बिस्तारै बिर्सन थालिएको छ ।
मैले पढाएको विद्यार्थी डाक्टर भएको भए उ बिदेश पनि हुन सक्थ्यो । इन्जिनियर भएका भए उ क्यानडा पनि भासिन सक्थ्यो । ड्राइभर भयो, कमसेकम मेरो गाउँमा गाडी चलाउँछ । दैनिक सयौं मान्छे ओसार्छ, काम टार्छ । साँच्चै, उसँगको भेटले मेरो मनको आकाश झनै फराकिलो भयो । उबेला म शिक्षक थिएँ, उ विद्यार्थी । त्यसबेला म सोच्थेँ, ‘उसको भविष्य मेरो हातमा छ ।’ ऐले उ ड्राइभर भएको छ, म यात्रु । ऐले म सोच्न थालेकोछु, ‘मेरो भविष्य त उसको हातमा छ ।’
(July, 27, 2013, Published in Kantipur Koseli-भवसागर घिमिरे)